ट्राफिक जरिवाना अब बैंकिङ प्रणाली मार्फत – सुनाखरी न्युज
Posted on: November 27, 2020 - 2:24 pm
सुनाखरी न्युज/ कास्की – जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कास्की र ग्लोबल आई.एम.ई. बैङक न्युरोड शाखाको संयुक्त पहलमा स्थापना भएको एक्सटेन्सन काउन्टर आज एक कार्यक्रममा बिच उद्‌घाटन भई विधिवत रुपमा सञ्चालनमा आएको छ ।
यो काउन्टर सञ्चालनमा आएसंगै कास्की जिल्लामा ट्राफिक नियमको उल्लंघन गर्ने सवारी चालकले दाखिला गरेको जरिवाना रकम बैँकिङ् प्रणाली मार्फत सिधै राजस्वमा पुग्ने भएको छ । कारवाहिमा परेका सवारी चालकले जरिवाना रकम उल्लेखित रसिद लिई जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कास्कीको तल्लो तलामा रहेको उक्त काउन्टरमा गई राजस्व दाखिला गराउनु पर्नेछ । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथी जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक जिवन श्रेष्ठ , गण्डकी प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय गगनगौडा कास्कीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक प्रभु प्रसाद ढकाल र ग्लोबल आई.एम.ई. बैंक न्युरोड शाखाका प्रमुखले उक्त काउन्टरको सयुंक्तरुपमा उद्घा टन गर्नुभयो ।